EUR/GBP Archives - Funda ukurhweba
tag: YeEUR / IGBP
I-EUR / GBP yokudibanisa ngaphezulu kwenqanaba le-0.8746, iDowntrend ngokunokwenzeka
Amanqanaba okuGxila aphambili: 0.9200, 0.9400, 0.9600
Amanqanaba enkxaso aphambili0.8800, 0.8600, 0.8400
Ixabiso le-EUR / GBP yeXesha elide leNqanaba: UkuQala
I-EUR / GBP iye yaqhubeka nokuhla kwayo. Ixabiso lenza ukuphakama okuphantsi kunye nezantsi. Esi sibini siwele kwinqanaba eliphantsi le-0.8746 kwaye saphinda saqala ngaphezulu. Ukudodobala kuya kuqhubeka xa inkxaso yangoku yaphulwe.
I-EUR / GBP-Itshathi yemihla ngemihla
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMAs zihle ziye ezantsi. Iibini ziye zawa kwinqanaba le-37 ye-Relative Strength Index period 14. Iponti ingaphantsi komgangatho ophakathi 50. Ixabiso nalo lisondela kwingingqi ethengiswayo.
I-EUR / GBP yeXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EUR / GBP isezantsi. NgoFebruwari 4 ukwehla; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-61.8% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.618 Fibonacci ulwandiso okanye inqanaba 0.8672.
I-EUR / GBP-4 Itshathi yeYure
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Iibini zingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ngoku ikwi-bearish umfutho. Iponti iwele kummandla ogqithisileyo.
Imbonakalo ngokubanzi ye-EUR / GBP
Iponti ngoku idibanisa ngaphezulu kwenqanaba le-0.8746. Esi sibini siya kuqhubeka nokwehla kwayo ukuba inkxaso yangoku iyaqhekeka.
tags YeEUR / IGBP, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-EUR / GBP Ukuhamba ngaphezulu kwenqanaba le-0.8740, iqala kwakhona ukuya phezulu
Namhlanje, i YeEUR / IGBP uye wangena kwinqanaba eliphantsi le-0.8768. Esi sibini sithengise kancinci. Ixabiso liwile kwinkxaso engaphezulu kwenqanaba le-0.8746 kwaye ibambe. Iibini ziya kuqhubeka nokuhamba kwayo ezantsi ukuba inkxaso yaphuliwe.
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMAs zihle ziye ezantsi. Iibini ziye zawa kwinqanaba le-33 ye-Relative Strength Index period 14. Iponti ingaphantsi komgangatho ophakathi 50. Ixabiso nalo lisondela kwingingqi ethengiswayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EUR / GBP isezantsi. NgoFebruwari 4 ukwehla; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-50% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 2.0 Fibonacci ulwandiso okanye inqanaba 0.8634.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Iibini zingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ngoku ikwi-bearish umfutho. Iponti iwele kummandla ogqithisileyo.
Iponti ifikelele kwi-bearish ukudinwa. Kuthiwa ukubuyela umva kwinqanaba le-0.8740. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso okophula amaxabiso ayi-0.8740, ukuhla ukuya ezantsi kuya kuqhubeka.
I-EUR / GBP Downtrend ifikelele kwi-Bearish Exhaustion, inokuthi ibuyele kwinqanaba le-0.8740
Amanqanaba enkxaso aphambili: 0.8800, 0.8600, 0.8400
namhlanje, i-EUR / GBP uye wangena kwinqanaba eliphantsi le-0.8768. Oku kudodobala kuyaqhubeka ukusukela nge-8 kaJanuwari kodwa kuye kwafikelela ekuphelelweni ngamandla kwe-bearish. Esi sibini siwele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kummandla ogqithileyo njengoko kukho imiqondiso ye-bullish.
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMAs zihle ziye ezantsi. Iibini ziye zawa kwinqanaba le-31 ye-Relative Strength Index period 14. Iponti ingaphantsi komgangatho ophakathi 50. Ixabiso nalo lisondela kwingingqi ethengiswayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EUR / GBP isezantsi. NgoFebruwari 4 ukwehla; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso okanye inqanaba 0.8740.
I-EUR / GBP -4 Itshathi yeYure
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Isibini singaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ngoku ikwi-bearish umfutho. Iponti iwele kummandla ogqithileyo.
Iponti ifikelele kwi-bearish ukudinwa. Kuthiwa ukubuyela umva kwinqanaba le-0.8740. Isenzo sexabiso sibonisa imiqondiso yokunyusa isiseko kwitshathi.
tags YeEUR / IGBP, Uhlaziyo lwamaxabiso
I-EUR / GBP ikwiDowntrend Trend, ukuhla ukuya kwinqanaba le-0.8869 emva kwenqanaba lovavanyo 0.9050
Amanqanaba okuGxila aphambili0.9200, 0.9400, 0.9600
Ukusukela nge-7 kaJanuwari, YeEUR / IGBP iye yawa kwaye ifikelele kwinqanaba eliphantsi le-0.8831. Umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokuphinda ubuyiselwe i-61.8% ye-Fibonacci ngoJanuwari 7. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwinqanaba le-1.272 ulwandiso lweFibonacci. Eli linqanaba eliphantsi le-0.8765.
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMAs zihle ziye ezantsi. Iibini ziye zawa kwinqanaba le-35 ye-Relative Strength Index period 14. Iponti ingaphantsi komgangatho ophakathi 50. Ixabiso nalo lisondela kwingingqi ethengiswayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EUR / GBP iye yaqhubeka nokuwa. Nge-27 kaJanuwari ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye inqanaba le-0.8711.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Isibini singaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isibini ngoku sikwi-bearish umfutho. Iponti ifikelela kwi-bearish ukudinwa.
Iponti inokuthi iqhubeke nokuhla kwayo. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kufikelela kwinqanaba eliphantsi le-0.8711
Ukurhweba nge-EUR / GBP ngokuthe ngcembe, ngoMeyi anokubuyela umva kwinqanaba le-0.8862
Ukuhlaziywa: 25 January 2021
I-EUR / GBP ibithengiswa kancinci ngokuya ezantsi. Iimarike azibonisanga ntshukumo ibalulekileyo yamaxabiso. Ngomhla kaJanuwari 14, idowntrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci elingu-88.6%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba isibini siya kuwela kwinqanaba le-1.1129 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba 0.8839. Imakethi ngoku idibanisa ngaphezulu kwenqanaba le-0.8839.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngokuthe tye. Iibini ziye zawa kwinqanaba le-39 ye-Relative Strength Index yexesha le-14.Iponti ingaphantsi komgangatho osembindini wama-50. Ixabiso nalo lisondela kummandla ogqithileyo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-EUR / GBP iye yaqhubeka nokuwa. Ngomhla kaJanuwari 25 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso okanye inqanaba 0.8862. Ukusuka kwintsebenzo yamaxabiso, imakethi iyadibanisa ukubuyela umva okunokubakho.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Isibini singaphantsi kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iponti ngoku ikwi-bearish umfutho. Ifikelela ekudinweni kwe-bearish.
I-EUR / GBP yokudibanisa ngaphezulu kwenqanaba le-0.8839. Esi sibini sithengise kancinci. Kukho ulindelo lwentshukumo ye-bullish. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukubuyela umva kwinqanaba le-1.272 okanye i-0.8862 esezantsi.
I-EUR / GBP ibuyisa ngaphezulu kwenqanaba0.8875, iqala kwakhona kwi-Uptrend
Ukuhlaziywa: 18 January 2021
Ixabiso le-EUR / GBP yeXesha elide leNqanaba: Bullish
I-EUR / GBP yayiyehla ishukuma njengoko amaxabiso afikelele ezantsi kwi-0.8869. Ngomhla kaJanuwari 15, isikiti saphinda saqala ukuya phezulu. Ukunyuka kufikelele kwinqanaba le-0.8969 kwaye kwabuya umva. Okwangoku, iponti kufuneka inyuke iye kwinqanaba le-0.9010 ukuba iphume kummandla we-downtrend.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngokuthe tye. Isibini siye sanyuka saya kwinqanaba lama-40 esiKhokelo seMandla esiNxulumene naMandla ixesha leshumi elinesine leeponti lisezantsi kweziko lama-14.
I-EUR / GBP yexesha eliphakathi eTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-EUR / GBP sifikelele ekupheleni kwe-bearish njengoko imarike inyuka. Ngomhla kaJanuwari 13 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso okanye inqanaba 0.8818. Ukusuka kwintsebenzo yamaxabiso, intengiso ibuyisile kwinqanaba le-0.8875.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Iibini zingaphezulu kwe-60% yoluhlu lwemihla ngemihla. Isibini ngoku sikwi-bullish umfutho. Iponti inokuthi inyuke.
I-EUR / GBP iphinde yaqala ukuya phezulu ukusukela nge-15 kaJanuwari. Iponti inyuke ngaphambili yaya kwinqanaba le-0.8925 kodwa ibuyisela umva ngoku kwimigangatho yangaphambili. Iimarike ziya kunyuka ukuba inkxaso yangoku ibambe.
Ukuhla kwe-EUR / GBP emva kokuNqatshwa ukusuka kwiNqanaba 0.9080, ngoMeyi kwakhona kwiNqanaba 0.8844
I-EUR / GBP kukuhla okuye ezantsi. Isibini sisondela kwinqanaba eliphantsi le-0.8800. Imakethi ifikelele kwinqanaba eliphantsi elidlulileyo kwinqanaba le-0.8866. Ixabiso lifikelele kummandla ogqityiweyo wentengiso. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba ngokuthe tye. Iibini zikwinqanaba lama-37 le-Index ye-Index ye-Relative Strength Index 14. Isikwere singaphantsi komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini se-EUR / GBP siye sangena kwinqanaba eliphantsi emva kokuphinda uzame ukuxhathisa kwinqanaba le-0.8910. Ngomhla kaJanuwari 13 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwexabiso kubonisa ukuba isibini siza kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 ziyehla ezantsi. Isibini singaphantsi kwama-25% kuluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iimarike ziwele kummandla ogqithisileyo weemarike. Abathengi kunokwenzeka ukuba bavele.
Ukusukela nge-6 kaJanuwari, iponti ibihleli iye ezantsi. Iwele kwinqanaba le-9080 kwaye isondela kwinqanaba eliphantsi le-0.8800. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, isibini siya kubuya umva kwinqanaba 1.272 okanye kwinqanaba 0.8844.